သငျသညျ INSTAGRAM ကိုစီစဉ်ကိုဘယ်လို - INSTAGRAM ကို - 2019
သငျသညျ Instagram ကိုအတွက်ပရိုဖိုင်းကိုစီစဉ်ကိုဘယ်လို
Instagram ကိုအတွက်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတော်များများသုံးစွဲသူများကလှပသောအမှတ်ရစရာများနှင့်တက်ကြွစွာစာရင်းသွင်းသူအသစ်များအတွက်ဆွဲဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်။ သင်တို့မူကားရှင်းလင်းရေးပြင်ပေးဖို့အချိန်ယူရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
မှန်ကန်စွာ Instagram ကိုအပေါ်အကောင့်ကိုင်တွယ်မတစ်ခုတည်းစာရွက်ရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုနားထောင်နိုင်သည့်အချို့သောအကြံပေးချက်များတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကြည့်ရှုနေဆဲရှိပါတယ်။
ထို့အပြင် Read: အ Instagram ကိုဓါတ်ပုံများကို load မနေပါနဲ့: အဓိကအကြောင်းရင်းများ
သိကောင်းစရာ 1: သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖြည့်ပါ
အသုံးပြုသူတစ်ဦး Instagram ကိုသင်၌ပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်လေ့လာရုံသူ့ကိုဆက်သွယ်ပါဖို့ဘယ်လိုပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသင့်သည်။
ယင်းပရိုဖိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါကသင်၏အမည်ကိုထည့်သွင်းရန်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကျိုးနပ်သည်။ ယင်းပရိုဖိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသော အကယ်. ဥပမာ, ကထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်မယ့် tool တစ်ခု, အစားသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုး၏အမည်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာနှင့် tapnuv ခလုတ်ကိုသွားဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ "Edit Profile".
လယ်ပြင်၌ "အမည်" သင့်ရဲ့အမည်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ, အဲဒီနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲမှုများကို save "ပြီးပြီ".
ဖော်ပြချက်အဓိကပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်, ဒါဖော်ပြချက်ထဲတွင်ပေးထားသောအချက်အလက်များအကျဉ်း capacious နှင့်တောက်ပဖြစ်သင့်သည်။
တတ်နိုင်သမျှဖော်ပြချက်ထဲမှာနှင့်သင့်စမတ်ဖုန်းကနေဖြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်အကောင့်စာမျက်နှာကို ယူ. , ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Edit Profile" နှင့်လယ်ယာထွက်ဖြည့်ပါ "ငါ့ကိုအကြောင်း".
ဖော်ပြချက်အများဆုံးအရှည် 150 ဇာတ်ကောင်ထက်မပိုနိုင်မသတိပြုပါ။
မသိမသာကွဲပြားဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖော်ပြချက်တစ်ခုသာအညီပြည့်စုံလိမ့်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါကြောင့်သင်အချက်အလက်များကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပုံဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့အသစ်တစ်ခုလိုင်းပေါ်တစ်ဦးချင်းစီဝါကျ, ဝဘ်ဗားရှင်း၏အကူအညီကိုရှာကွဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Instagram ကိုစာမျက်နှာ၏ဝဘ်ဗားရှင်းအပေါ်မည်သည့် browser ကိုသွားပြီး, လိုအပ်သောလျှင်, ခွင့်ပြုချက်လုပ်ဆောင်။
, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုစာမျက်နှာကိုဖွင့်သက်ဆိုင်တဲ့အိုင်ကွန်ပေါ်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက် button ကို click "Edit Profile".
ကော်လံအတွက် "ငါ့ကိုအကြောင်း" နှင့်ဖော်ပြချက်သတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း။ သငျသညျသစ်တစ်ခုလိုင်းနှင့်အတူစတင်ထိုကဲ့သို့သောသင်၏ပရိုဖိုင်အဖြစ်စာသား, စီသစ်ကိုကို item မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ တံဆိပ်ကပ်သင် GetEmoji ဝန်ဆောင်မှု site မှ copy နိုငျသောသင့်လျော်သည့်အီမိုဂျီရုပ်ပြောင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်ဖော်ပြချက်ဖြည့်ပြီးစီးသောအခါ, ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ် "Save".
သငျသညျအတိအကျအလယ်ဗဟိုတွင် (ကျနော်တို့ကနာမည်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်တူညီသောလမ်းအတွက်) သင်၏ပရိုဖိုင်မှဖော်ပြချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အမည်ရပင်ထပ်မံသွားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Instagram ကို၏ဝဘ်ဗားရှင်းသုံးပြီးပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို web ဗားရှင်း သွား. , Edit Profile အပိုင်းကိုဖွင့ ်. ။
လယ်ပြင်၌ "ငါ့ကိုအကြောင်း" လိုအပ်သောဖော်ပြချက်စာရင်းပြုစု။ လိုင်းမှဗဟိုပြုနေကြတယ်, သငျသညျအသီးအသီးလိုင်း၏ left သင်သည်အောက်ဖော်ပြပါကွင်းခတ်ကနေကူးယူနိုင်သည့်နေရာများ, add ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလိုနှင့်အမည်အားဗဟိုမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဆိုပါကလည်းနေရာ add ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ရလဒ် Save "Send".
က "ဆက်သွယ်ပါ" ခလုတ်ကို Add
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပရိုဖိုင်းကိုလုပ်ချင်နဲ့, ဒါကြောင့်, အလားအလာဝယ်လက်များနှင့်ဖောက်သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသငျသညျသှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤခလုတ်ကိုထည့်သွင်းရပါမည် "ဆက်သွယ်ပါ"သင့်တည်နေရာ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို: အရာအောက်မှာကလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုစီစဉ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုရှိ "ဆက်သွယ်ရန်" ခလုတ်ကို add လုပ်နည်း
တစ်ဦးတက်ကြွ link ကိုထားပါ
သငျသညျ website တစ်ခုရှိပါကအသုံးပြုသူများကိုချက်ချင်းပြုလုပ်ပြောင်းရန်နိုင်အောင်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုတက်ကြွစွာ link ကိုနေရာသေချာပါစေ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တစ်ဦးတက်ကြွ link ကိုအောင် Instagram လုပ်နည်း
သိကောင်းစရာ 2: တစ်ဦးကိုယ်ပွား Make
avatar - အရည်အသွေးပရိုဖိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်း။ တစ်ဦးကိုယ်ပွားအပေါ်သတ်မှတ်ထားရုပ်ပုံအများအပြားစံတွေ့ဆုံရန်ရှိပြီး:
ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိကြလော့။ Instagram ကိုအတွက်ကိုယ်ပွားဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ဒီဓာတ်ပုံကလျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးရှိရမည်ဆိုလိုတာက, ဿုံမြင်နိုင်သည်, ကောင်းသောအလငျး၌ရိုက်ကူး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Program ကိုဓါတ်ပုံ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်
မလိုအပ်သောဒြပ်စင်ဆံ့ဘူး။ ဓာတ်ပုံအသုံးပြုသူများကိုချက်ချင်းကသရုပ်ဖော်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်ကြောင်း, ထို့ကြောင့်သူကပုံတစ်ဦးရိုးရှင်းသောခဲ့တာနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်နိုင်အောင်အလွန်သေးငယ်သည်, ထိုကိုယ်ပွားအပေါ်တပ်ဆင်ထားသည်။
တစ်ဦးကိုယ်ပွားအဖြစ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ တစျထောငျသို့မဟုတ်ဒီတော့ကိုယ်အင်္ဂါများ၌တစ်ဦးကိုယ်ပွားအဖြစ် installed ထားတဲ့, အင်တာနက်ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုမသုံးပါနဲ့။ ကိုယ်စားပြုပုံကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ - ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လိုဂိုရဲ့အဘယ်သူ၏ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တစ်ချိန်ကတစ်ဦးတည်းသာအသုံးပြုသူကိုယ်ပွား, ဒါကြောင့်။
သင့်လျော်တဲ့အရွယ်အစားရှိကြလော့။ ဤအချိန်စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုတာက Instagram ကိုလှည့်လည်သည့်အတွက်အားလုံးကိုယ်စားပြုပုံ။ သငျသညျမဆိုမိုဘိုင်းဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ Pre-သီးနှံပုံကို အသုံးပြု. တကစတုရန်းအောင်, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရလဒ်ပြောင်းလဲသွားလျှင်ကနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Photoshop မှာမြို့ပတ်ရထားဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီး
သငျသညျတခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောပရိုဖိုင်းရှိပါကကိုယ်ပွား၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်လိုဂိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါလိုဂိုပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါဆိုပါကတူညီသောသို့မဟုတ်သင့်ပရိုဖိုင်း၏ဆောင်ပုဒ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မဆိုသင့်လျော်သောရုပ်ပုံသုံးစွဲဖို့အခြေခံအဖြစ်ဆွဲရန် သာ. ကောင်း၏။
ပြောင်းလဲမှုကိုယ်ပွားသင်သည်သူတို့၏ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာကိုသွားပါထို့နောက် button ကို click ပါလျှင်, နိုင် "Edit Profile".
Tapnite button ကို "ပြောင်းလဲခြင်းပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံကို".
ကို Select လုပ်ပါ "၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုမှရွေးပါ"ပြီးတော့သင့်ရဲ့ device ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲကရုပ်ပုံကိုရွေးပါ။
Instagram ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပွားစိတ်ကြိုက်ဆက်ကပ်။ သင်တို့သည်လည်းစကေးနဲ့ပုံရိပ်ရွေ့လျား, စက်ဝိုင်း၏တပ်မက်လိုချင်သောအဧရိယာထဲမှာနေရာတစ်ခုကိုယ်ပွားအဖြစ်ပြုမူလိမ့်မည်သည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အပြောင်းအလဲများကို Save "ပြီးပြီ".
သိမှတ်ဖွယ် 3: ဓါတ်ပုံများ၏စတိုင်ကိုလိုက်နာပါ
အားလုံး Instagram ကို user information, ဒါပေမယ့်လည်းလှပသောစာမကျြနှာမရသာချစ်ကြတယ်။ လူကြိုက်များအကောင့်ကိုရှာဖွေ - အားလုံးနီးပါးသူတို့ထဲက image processing တွင်တစ်တစ်ခုတည်းစတိုင်မှတဆင့်ကြည့်ရှုကြ၏။
ဥပမာအားဖြင့်, ထုတ်ဝြေခင်းမပြုမီဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်, သင်ကမြို့ပတ်ရထား image ကိုအောင်, ဥပမာ, တူညီတဲ့ filter ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘောင်ထည့်သွင်းသုံးနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်အောက်ပါ applications များသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြ:
VSCO - မရရှိနိုင်ပါ filter များ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တဦး။ သငျသညျကို manually ချုံ့ခြင်း, အရောင်ဆုံးမခြင်း, alignment ကိုနှင့်အခြားထိန်းသိမ်းရေးဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့် image ကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြု built-in အယ်ဒီတာတစ်ဦးရှိ၏
အန်းဒရွိုက် VSCO များအတွက် App ကို Download လုပ်ပါ
VSCO app ကို iOS အတွက် Download
Afterlight - အယ်ဒီတာနှစ်ဦးကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ filter များရှိပြီးအဖြစ်သင့်စာမျက်နှာကယ့်ကိုတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေမည်ဟုကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတ်ပုံကိုဘောင်အများကြီး။
Android အတွက် Afterlight app ကို Download လုပ်ပါ
iOS အတွက် Afterlight app ကို Download လုပ်ပါ
Snapseed - Google ထံမှလျှောက်လွှာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာများ၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ ဒီနေရာတွင်အသေးစိတ်အတွက် image ကိုတည်းဖြတ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြောက်ကုသမှု Brush အဖြစ်ချို့ယွင်းချက်ကို fix မှ tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
Android အတွက် Snapseed app ကို Download လုပ်ပါ
Snapseed iOS အတွက် Download
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် Applications ကိုကင်မရာ
Instagram ကိုထုတ်ဝေအဆိုပါဓာတ်ပုံများ, အောက်ပါအခြေအနေများဖြည့်ဆည်းရပါမည်:
တစ်ခုချင်းစီကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကောင်းသောအလငျး၌ဖယ်ရှားရမည်။ သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, လငျး၌ယူဓာတ်ပုံတွေ upload ဖို့ကြိုးစား;
image ကိုမဆိုထိုအ parameters တွေကိုကိုက်ညီတဲ့မပါဘူးဆိုရင်, အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် သာ. ကောင်း၏။
သိမှတ်ဖွယ် 4: ရေးသားချက်များများအတွက်အရည်အချင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖော်ပြချက်သိမ်းဆည်းထားပါ
တိုင်မှစာသားအကြောင်းအရာတက် drawing မှာတော့အကောင့်ထဲသို့အောက်ပါအချက်များယူသင့်ပါတယ်:
စာတတ်မြောက်ရေး။ တစ် post ကိုရေးသားပြီးနောက်ပြန်ဖတ်ပါနှင့်မဆိုအမှားများနှင့်ပျက်ကွက်ပြင်ပေးရန်,
ဖွဲ့စည်းပုံ။ ပို့စ်ရှည်လျားသည်ဆိုပါကစဉ်ဆက်မပြတ်စာသားကိုမသွားသင့်ကြောင်း, အပိုဒ်သို့ခွဲခြားရလိမ့်မည်။ စာသားစာရင်းပါရှိသည်ဆိုရင်သူတို့ကရုပ်ပြောင်တံဆိပ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြချက်စဉ်ဆက်မပြတ်စာသားကို သွား. , အသစ်တစ်ခုကိုလိုင်းပေါ်တိုင်းအသစ်ကစဉ်းစားသည်မှတ်စုထဲမှာဥပမာအားအခြားလျှောက်လွှာ, အတွင်းစာသားကိုရေးဖို့, ပြီးတော့ Instagram ကိုအတွက်ရလဒ်ထည့်သွင်းမပြုခဲ့ကြောင်း,
hashtags ။ တစ်ခုချင်းစီကို post ကိုဤမျှလောက်များစွာသောပို့စ် hashtags ကိုများအတွက်ဖော်ပြချက်မှဆက်ပြောသည်အသုံးပြုသူများအများဆုံးအရေအတွက်အားကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သင့်သည်။ hashtags ကို၏စည်းစိမ်မှအသုံးပြုသူများကိုတွှေမပြုခဲ့စာသားကိုစာသားအောက်မှာဒါမှမဟုတ်စာတိုက်မှသီးခြားမှတ်ချက်များအတွက် hash (#) နှင့် tag ကိုစာမျက်နှာ၏မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ယူနစ်, သို့မဟုတ်နေရာ keywords ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုအတွက် hashtags ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
ပုံအောဖျေါပွခကျြမြား၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတွင်ငါသည်ယခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အသေးစိတ်အတွက် commented ကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ဤကိစ္စကိုအာရုံကိုဆွဲမယ့်မပေးပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ကဘယ်လို
ဤရွေ့ကား Instagram ကိုအတွက်စာမျက်နှာစီစဉ်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအဓိကအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းစည်းမျဉ်းများအတွက်ချွင်းချက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်အကောင့်အတွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်စာရွက်တက်ကောက်နေ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အရသာကိုထင်ရှားစွာပြ။
ဗီဒီယို Watch: Trying Traditional Malaysian Food (အောက်တိုဘာလ 2019).